Titanium Carbide Upfu, TiC - Goodao Technology Co, Ltd.
Titanium carbide poda inoshandiswa mune yakakwira tembiricha yekupisa yekumwaya zvinhu, zvinhu zvekumwaya, yakaoma firimu zvinhu, zvemauto avhiyesheni matenals carbide uye cermet. Sekuwedzera kwekugadzirwa kwe thermistors, simudzira kupfeka kuramba
Molecular fomula TiC
Nzvimbo yakanyunguduka 3140'C
Kuwandisa 4. 930 g / Rine mamiririta
Zvishandiso Titanium carbide poda inoshandiswa mune yakanyanya tembiricha inopisa kupisa zvinhu, zvinhu zvekushongedza, zvakaoma zvemufirimu zvinhu, zvemauto avhiyesheni matenalscarbide uye cermet. Sekuwedzera kwekugadzirwa kwethermistors, gadziridza kupfeka
1.Pfuma: pfumbu simbi kubwinya crystalline yakasimba, yakaoma, yechipiri chete kune dhayamondi kuomarara,
magineti isina kusimba.
2. Kuwandisa (g / cm3,25 ℃): 4.93
4. Nzvimbo yakanyunguduka (℃): 3140
Boiling poindi (℃, mumhepo kumanikidza): 4820
6. Solubility: inogadziriswa in nitric acid uye aqua regia, isingasviki mumvura.
7.Mo kuomarara: 9 ~ 10
8. Coefficient yekuwedzera kwekushisa (K): 7.74 × 10-6
Thermal kuitisa (W / (M · K)): 21
10. Kupisa kwekuumbwa (kJ / mol): -183.4
1. Zvinoumbwa nezvinhu: Titanium carbide ceramics yakanyanya kuoma zvishandiso. TiC inogona kugadzirwa akasiyana siyana maceramic zvedongo zvinhu neTNN, WC, Al2O3 uye zvimwe zvigadzirwa. Titanium carbide ceramic inoshandiswa yekumhanyisa waya waya vhiri uye kabhoni simbi yekucheka nekuti haina kukonzera crescent kupfeka nesimbi uye ine yakanaka oxidation kuramba. Composite ceramic yekucheka maturusi ane titanium carbide ave achishandiswa zvakanyanya.
2.Muchina wekushongedza: Titanium carbide sezvo iyo yekumusoro yekumhara iri kwazvo abrasion inodzivirira zvinhu. Mamwe macarbides akasimba akaiswa pamusoro penzvimbo yedhaimani nemaitiro epanyama kana emakemikari ekuumba simbi kana alloys. Idzi simbi kana alloys dzinogona kudyidzana nemaatomu ekabhoni padhaimani pamusoro pekupisa kwakanyanya kuti vagadzire macarbides akasimba. Aya ma carbides haakwanise kungo sunga zvakanaka nedhaimani, asi zvakare inopinzwa mukati nesimbi yesimbi, kuitira kuti ibatanidze kunamatirana pakati pesimbi nedhiraivhu yesimbi. Hupenyu hwebasa remucheki hunogona kuwedzerwa kanoverengeka nekuiswa kwetitanium carbide yakatetepa firimu pane aricheke.
3. Mune ongororo yenyukireya fusion reactor, iyo tritium-isingagoneki inokwanisika dura rakaumbwa pamusoro peatanium carbide yekumhara zvinhu uye (TiN + TiC) inoumbwa nekupfeka zvinhu mushure memakemikari kupisa kurapwa kunogona kuramba hydrogen ion irradiation, tembiricha gradient uye kupisa kwemhepo.
4. Pamusoro pezvo, titanium carbide inogona zvakare kushandiswa kugadzira chinozunguzika yekunyungudika tini, lead, kadhmiamu, zinc nezvimwe simbi; Transparent titanium carbide ceramics zvakare akanaka maziso.
Pashure: Molybdenum Carbide Upfu, Mo2C
Zvadaro: Manganese Carbide Upfu, Mn3C
titanium carbide upfu
titanium carbide upfu Mafekitori
titanium carbide upfu Fekitori
titanium carbide powder Mugadziri
titanium carbide powder Vagadziri
titanium carbide upfu Mutengo
titanium carbide upfu Quotes